हवाई भाडा बढ्यो: कहाँको कति ? « Artha Path
हवाई भाडा बढ्यो: कहाँको कति ?
काठमाडौं । वायुसेवा कम्पनीहरुले बुधबारदेखि लागू हुनेरी हवाई भाडा बढाएका छन् । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य बढाएसँगै वायुसेवा कम्पनीको छाता संगठन वायुसेवा सञ्चालक संघले सोमबार हवाई भाडादर बढाएको हो ।
वायुसेवाले विभिन्न स्थानका लागि १७० रुपैयाँदेखि ८ सय ४० रुपैयाँसम्म भाडादर बढाएको छ । भाडा बढेसँगै अब काठमाडौं–धनगढीको भाडादर १६ हजार ८०५ रुपैयाँ पुगेको छ । संघले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ५ सय रुपैयाँ र अन्य विमानस्थलमा ३ सयदेखि ४ सय रुपैयाँसम्म एयरपोट शुल्क (ट्याक्स) कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, अब काठमाडौं देखि धनगढी १६ हजार ८०५ रुपैयाँ, काठमाडौं देखि माउन्टेन एभरेष्ट १४ हजार ७२० रुपैयाँ, काठमाडौं भद्रपुर १२ हजार ८०५ रुपैयाँ, काठमाडौं देखि नेपालगन्ज १३ हजार ८१५ रुपैयाँ, काठमाडौं देखि विराटनगर १० हजार ८० रुपैयाँ, काठमाडौं देखि भैरहवा ८ हजार ५७५ रुपैयाँ, काठमाडौं देखि सिमरा ४ हजार १९५ रुपैयाँ, काठमाडौं देखि जनकपुर ५ हजार ७९५ रुपैयाँ, काठमाडौं देखि विराटपुर ४ हजार ९३५ रुपैयाँ र काठमाडौं देखि पोखरा ६ हजार ९०५ रुपैयाँ रहेको छ ।